Ireo karazana 7 fanaintainan'ny fibromyalgia [rehetra momba ny fanaintainan'ny fibromyalgia samy hafa]
Ireo karazana 7 fanaintainan'ny Fibromyalgia
06 / 03 / 2019 /Fanamarihana 0/i aretin-kozatra/av loza
Fibromyalgia dia aretina fanaintainan'ny fanaintainan'ny aretim-peo malefaka izay afaka manome fototry ny fanaintainana maro samihafa. Betsaka ny olona tsy mahatsapa fa matetika dia mizara ho karazany maro samihafa. Ireto misy karazana 7 fanaintainan'ny fibromyalgia tokony ho fantatrao.
Ao amin'ny fibromyalgia, maro amin'ireny fanaintainana ireny no afaka miakatra ary ny sary fanaintainana dia miovaova be. Eto isika dia mandalo ny sokajy fito fanaintainana fibromyalgia mba hahafahanao mianatra bebe kokoa momba ireo. Raha manana fibromyalgia ny namanao na mpianakavy, dia afaka manampy anao hahatakatra bebe kokoa momba ny fiantraikan'izany fitiliana sarotra izany.
Miady izahay ho an'ireo izay manana aretina sy aretina mitaiza fanaintainana maharitra mba hanana fotoana tsara kokoa amin'ny fitsaboana sy fizahana - zavatra tsy eken'ny rehetra, indrisy. Toa anay ao amin'ny pejin'ny FB og fantsona YouTube ao amin'ny media sosialy hanatevin-daharana antsika amin'ny ady ho amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny olona an'arivony.
Ity lahatsoratra ity dia hamakivaky karazana fanaintainana fibromyalgia fito - Ho gaga anao ny sasany amin'izy ireo. Any am-pototry ny lahatsoratra ianao dia afaka mamaky ny fanehoan-kevitra avy amin'ny mpamaky hafa ary mahazo torohevitra tsara.
Manontany tena ve ianao sa misy zavatra hafa tianao? Araho izahay ao amin'ny pejy Facebook «Vondt.net - Manala ny fanaintainanao izahay"na Fantsona Youtube izahay (manokatra amin'ny rohy vaovao) hahazoana torohevitra tsara isan'andro sy fampahalalana mahasoa momba ny fahasalamana.
Hyperalgesia no teny ara-pitsaboana hamaritana ny fitomboan'ny fahatsapana tsapanao rehefa manana fibromyalgia. Midika ny hoe 'Hyper' mihoatra ny mahazatra ary «algesia» dia mitovy dika amin'ny fanaintainana.
Ny fikarohana dia naneho fa ny ampahany amin'ny atidoha amin'ireo izay manana fibromyalgia dia mandika ny fanaintainan'ny fanaintainana amin'ny fomba hafa - ary ireo famantarana ireo dia adika amin'ny 'volume avo kokoa'. Izany hoe, ny mari-pamantarana fanaintainana dia voadika amin'ny fomba diso ary manamafy be.
Io no iray amin'ireo antony mahatonga ny olona manana fibromyalgia matetika mazàna fanaintainana mahery vaika amin'ny hozatra, ny hozatra ary ny tonon-taolana noho ny hafa. Noho izany antony izany, ity vondrona marary ity dia miankina betsaka amin'ny fitsaboana ara-batana, isan'andro mivezivezy fanazaran-tena ary fampiofanana mahazatra (toy fanofanana vondrona ao anaty dobo filomanosana).
Vakio bebe kokoa: - Fanatanjahan-tena 5 ho an'ireo izay manana Fibromyalgia
Tsindrio eto raha hamaky bebe kokoa momba ireo fampiasana fanatanjahan-tena ireo - na jereo ny horonantsary etsy ambany.
Lahatsary: ​​Fanaovana hetsika 5 ho an'ireo izay manana Fibromyalgia
Tena zava-dehibe ny fahafantarana ny fanatanjahan-tena novaina zatra izay misy fibromyalgia. Ny horonan-tsary eto ambany dia maneho fanazaran-tena malefaka dimy izay afaka manampy anao hitazona fihetsiketsehana, hivezivezy ary hanamaivana ny fanaintainana.
Manambatra ny fianakavianay ary misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube izahay (tsindrio eto) ho an'ny toro-hevitra fanatanjahan-tena maimaim-poana, programa momba ny fanatanjahan-tena ary ny fahalalana ara-pahasalamana. Tonga soa!
2. Ny fanaintainan'ny neuropathic
Betsaka manana fibromyalgia no tratry ny fanaintainan'ny neuropathic. Ity karazana fanaintainana ity dia mety miteraka soritr'aretina hafahafa toa ny fikitrohazo, ny fandoroana, ny mangentana, ny malo-kena na ny tingling amin'ny sandriny sy ny tongotra. Ireo soritr'aretina ireo dia mety hampahory mivantana koa.
Misy fepetra fitsaboana maromaro izay afaka manampy amin'ny fanaintainana toy izany - ao anatin'izany ny fanafody. Ny fikarakarana ara-batana, ny tonon-taolana mahazatra ary ny acupuncture dia fitsaboana izay afaka manampy amin'ny fanamaivanana ny fanaintainan'ny neuropathika.
Betsaka ny olona mararin'ny fanaintainan'ny aretina sy ny aretina manimba ny fiainana andavanandro - izany no antony amoahanay anao Zarao ity amin'ny media sosialy ity lahatsoratra ity, Aza misalasala mankafy ny pejy Facebook anay ary manaova hoe: "Eny amina fikarohana bebe kokoa momba ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny fanaintainana".
Amin'izany fomba izany, ny olona dia afaka mampiharihary ny soritr'aretina mifandraika amin'ity aretina ity ary manome antoka fa olona maro no raisina am-pahamatorana - ary amin'izany dia mahazo ny fanampiana ilainy Manantena koa izahay fa ny fitomboan'ny fiheverana toy izany dia afaka mitarika famatsiam-bola bebe kokoa amin'ny fikarohana momba ny fomba fanombanana sy fitsaboana vaovao.
3. aretin'andoha fibromyalgia
Ireo manana fibromyalgia matetika dia marary aretin-doha matetika kokoa. Raha ny tena izy dia fahita matetika ho an'ity vondrona marary ity ny fiantraikany matetika amin'ny aretin'andoha (aretin'andoha amin'ny aretin-doha) sy ny migraine.
Mifamatotra amin'ny antony telo ao amin'ireo manana fibromyalgia izany:
Kalitao matory ratsy (noho ny fanaintainana amin'ny alina)
Ny fanaintainan'ny fanaintainana mahery vaika
Ny tebiteby ara-tsaina (fanaintainana maharitra sy torimaso tsy mandeha - mazava ho azy - mihoatra ny angovo ara-tsaina)
Hitantsika indray fa ny antony iraisana amin'ireto lafin-javatra telo ireto dia hypersensitivity noho izany dia mandika ny mari-pahaizana mahery vaika ny atidoha. Ary tena ao anatin'io hevi-dehibe io no antenain'ny olona fa mety handaitra ny ho avy amin'ny fibromyalgia.
4. fanaintainan'ny tavy sy ny vay
Ny olona voan'ny fibromyalgia dia misy taha avo 50 isan-jato mahery voadaroka aretim-bavony mora mampahory. Toeram-pandevonan-kanina izy io, izay mampiavaka ny kibo amin'ny vavony, ny entona ary ny vavony mivonto. Ny soritr'aretina hafa dia misy ny constipation, ny aretim-pivalanana, ny mie, ny fahatsapana ny filàna tsy maintsy miasa sy ny lava-paty.
Ny Fibromyalgia dia mety miteraka fanaintainana eo amin'ny pelvika, izay eo amin'ny tonon-taolana eo amin'ny tendany, fa koa mankany amin'ny tenda sy ny symphysis. Ny soritr'aretina mampiavaka azy dia mety hidika ho faniriana matetika ary matetika ianao 'mikiaka'.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanajana ny 'fibromyalgia diet' ary hanaraka ny torohevitra momba ny sakafo nasionaly. Ao amin'ny lahatsoratra eto ambany dia azonao vakiana izay heverin'ny fikarohana fa sakafo tsara indrindra ho an'izay voan'ny fibromyalgia.
Vakio koa: Inona no tokony ho fantatrao momba ny Syndrome mora tezitra
5. Miely sy mivelatra be loatra ny hozatra
Fantatrao ny hetsika hozatrao ao amin'ny vatanao manontolo rehefa voan'ny gripa ianao? Azo oharina amin'ny karazana fanazaran-tena hozatra izay marary marobe ny fibromyalgia.
Endrika mampiavaka ny fibromyalgia dia ny fanaintainana mihetsiketsika sy maharitra amin'ny hozatra sy ny taolana malefaka. Ireo fanaintainana ireo dia matetika no faritana ho fanaintainana lalina, fahalemem-panahy, henjana na fikorontanana eraky ny vatana - ao anatin'izany ny sandry, ny tongotra, ny hatoka ary ny soroka.
Betsaka ny olona sahiran-tsaina amin'ny:
Ny fanaintainan'ny lamosina ambany - izay mety hanelingelina ny hozatra koa ary hiteraka taratra amin'ny tongotra.
Hirifiry sy fifanenjanana amin'ny tendany sy soroka.
Fanaintainana eo anelanelan'ny soroka.
Aza adino fa ny fanaintainana dia mety miovaova sy mamindra ary mamely ireo toerana samihafa ao amin'ny vatana. Anisan'izany ny sandry sy ny tanana. Ao amin'ny lahatsoratra eto ambany dia afaka mahita fanazaran-tena tsara fito natao natao hanampiana amin'ny osteoarthritis ianao.
Vakio koa: - Fanatanjahan-tena 7 ho an'ny Osteoarthritis amin'ny tanana
6. fanaintainana miaraka
Ny fanaintainana sy ny hamafin'ny fanombohana dia voalaza matetika amin'ny olona misy fibromyalgia. Izany dia vokatry ny hozatra mihenjana sy maharary izay mametra ny fahafaha-mihetsika - ary mihamafy.
Tsy toy ny fanaintainan'ny aretin'ny aretin-tsaina, matetika dia tsy misy fanaintainana sy fivontosana amin'ny tonon-taolana amin'ny fibromyalgia. Ity dia iray amin'ireo fomba hanavahana an'io aretina io amin'ny vanin-taolana rheumatic na lupus systemic - izay ahitanao matetika fa mihombo ny fivontosana an'io olona io.
Voadona amin'ny aretim-po ratsy ve ianao? Eto ambany dia azonao atao ny mamaky momba ny fepetra fitsaboana voajanahary valo - tsy misy voka-dratsy.
Marary ve ny hoditrao amin'ny fikasohany? Efa tsikaritrareo ve fa na ny fikapohana maivana amin'ny akanjo na fihetsika tsara tarehy dia mety handratra tokoa? Izany dia allodynia - fambara fanaintainana izay manaitra ny maro. Ary izany dia manandrana ny fanandramana mitsitsy kely amin'ireo olom-boafidy.
Betsaka ny mamaritra ny allodynia ho fitomboan'ny fahatsapana ny hoditra izay azo ampitahaina amin'ny tara-masoandro matavy. Ny fikarohana dia naneho fa izany dia vokatry ny fihenan'ny hypersensitivity noho ny fahatsapana afovoany mifandraika amin'ny fibromyalgia. Raha atao teny hafa, diso ny fandikana ireo soritr'aretina ao amin'ny ati-doha ary ny vokany dia - fanaintainana.
Allodynia dia endrika fanaintainana somary tsy fahita firy. Ankoatra ny fibromyalgia, io fanaintainana io dia tsy hita afa-tsy ao amin'ny neuropathies, shingles ary migraine.
Vakio koa: 6 Fanazaran-tena hanohitra ny Osteoarthritis manan-danja amin'ny kaody
Mila fampahalalana bebe kokoa? Midira amin'ity vondrona ity ary mizara vaovao bebe kokoa!
Aza misalasala misoratra anarana amin'ny fantsona antsika (tsindrio eto) - ary araho ny pejinay ao amin'ny FB raha mila torohevitra momba ny fahasalamana isan'andro sy programa momba ny fanatanjahan-tena.
Tena antenainay fa ity lahatsoratra ity dia afaka manampy anao amin'ny ady amin'ny fanaintainana maharitra. Raha zavatra tiana hotadiavinao koa dia manantena izahay fa hifidy ny hiaraka amin'ny fianakavianay ao amin'ny media sosialy sy hizara ilay lahatsoratra bebe kokoa.
Ary, mila mangataha tsara mba hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy na amin'ny alàlan'ny bilaoginao (azafady mampifandray mivantana amin'ny lahatsoratra). Ny fahatakarana, ny fahalalana ankapobeny ary ny fitomboan'ny fifantohana no dingana voalohany mankany amin'ny fiainana andavanandro tsara kokoa ho an'ireo izay manana aretina mitaiza fanaintainana maharitra.
Soso-kevitra momba ny fomba ahafahanao manampy amin'ny ady mangirifiry:
Safidy A: Mizarà mivantana amin'ny FB - Adikao ny adiresy tranokala ary apetaho amin'ny pejy facebook anao na amin'ny vondrona facebook misy ifandraisany amin'ny maha mpikambana anao. na tsindrio ny bokotra "SHARE" etsy ambany mba hizara bebe kokoa ao amin'ny facebooko.
Hikasika ity mba hizarana fanampiny. Misaotra betsaka amin'ny rehetra izay mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fahazoana ny aretina mitaiza.
Safidy C: Manaraha sy mitovy Pejinay Facebook (kitiho eto raha tiana) ary Fantsona YouTube izahay (tsindrio eto raha mila horonan-tsary misimisy kokoa!)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/de-syv-typene-av-fibromyalgismerter.jpg?media=1648573622 368 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2019-03-06 20:14:072021-03-24 13:24:42Ireo karazana 7 fanaintainan'ny Fibromyalgia
6 Fanazaran-tena hanohitra ny Osteoarthritis manan-danja amin'ny kaody Fibromyalgia sy fanaintainana amin'ny maraina